उत्पादन र रोजगारी संरचना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
रोजगारीको नयाँ परिभाषाले गर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिएको छ, जुन यसअघि २–३ प्रतिशत मात्र थियो । पछिल्लो बेरोजगारी दरचाहिँ अर्थतन्त्रको वास्तविकता नजिक छ । श्रम सर्वेक्षणले विभिन्न क्षेत्रले दिने रोजगारीको स्थिति र संरचनालाई पनि उजागर गरेको छ । माथि उल्लिखित रोजगारीको परिभाषाअनुसार श्रम सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका करिब २ करोड ७ लाख काम गर्ने सक्ने मानिसमध्ये नेपालमा करिब ७० लाख ८६ हजार मानिस रोजगार रहेको देखाएको छ । यसबाट श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
उत्पादन क्षेत्रअनुसारको रोजगार संलग्नता अर्थात् संरचना हेर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रले २१.५ प्रतिशत रोजगारी मात्र दिएको पाइएको छ । सोही समयमा उत्पादनमा २८.१ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रले रोजगारीमा २१.५ प्रतिशत योगदान दिनुले यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन भइरहेको देखाउँछ । अथवा, यस क्षेत्रमा आफ्नो उपभोगका लागि संलग्न हुने जनशक्ति हिस्सा अझै उच्च रहेको पनि देखाउँछ । सामान्यतया कम उत्पादकत्व हुने कृषि क्षेत्रबाट श्रम पलायन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
मासिक आम्दानीमा भिन्नताले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा आय असमानता सिर्जना हुने हुन्छ साथै समग्रमा औसत प्रतिआय पनि कम हुन्छ । तसर्थ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नका लागि बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँदै जानुपर्ने र कम आय भएको क्षेत्रतर्फ प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको प्रयोग गरी कम आय हुने क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर आम्दानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, बढी आय हुने क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सो क्षेत्रका लागि चाहिने सीप र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हालैको श्रम सर्वेक्षणमा कुनै पनि शिक्षा नभएका व्यक्तिको मासिक आम्दानी औसत रु. १४,०६५ हुँदा स्नातक तहमाथि पढेकाहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. ३०,००० भन्दा माथि रहेको पाइएको छ । यसरी अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्तिको आय बढ्न व्यक्तिहरू बढीभन्दा बढी शिक्षित र सीपयुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:३९
आम रूपमा चुरेको भौगोलिक विशेषतालाई एकै प्रकृतिको माने पनि त्यसभित्र विविधता छ । त्यसले यसको भिरालोपना तथा माटोको प्रकृति लगायतलाई आधार बनाई संवेदनशील क्षेत्र, खेतीपातीका लागि अयोग्य क्षेत्र, बसोबास तथा खेतीयोग्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ ।
संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो स्थानान्तरण सकभर स्थानीय बासिन्दा नै बसिरहेको क्षेत्र नजिक हुनुपर्छ र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमको पनि हुनुपर्छ । खेती गर्न अनुपयुक्त क्षेत्रमा अन्नबालीको सट्टा रूख रोप्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ । बसोबास तथा खेती गर्न योग्य ठाउँको स्वामित्व किसानलाई दिनुपर्छ । स्वामित्वका साथै उनीहरूलाई संरक्षणमुखी खेतीपातीमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ चुरे क्षेत्रको सहभागितात्मक भूउपयोग नक्सा बनाई सोही अनुरूप त्यहाँको बसोबास र भूउपयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यचाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हुन आवश्यक छ ।
अधिकांश भूभाग वनले ढाकेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा भूउपयोगसँगै जोडिएर आउने अर्को पक्ष हो— वन क्षेत्रको उपयुक्त संरक्षण । सामुदायिक वनको अभ्यासबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सामूहिक जिम्मेवारी रहने हुँदा थप अतिक्रमण घट्नेछ ।